MVola: voalohany mampiasa ny vola eletronika | NewsMada
MVola: voalohany mampiasa ny vola eletronika
Manamora ny lafiny fikirakirana vola amin’ny finday ny MVola, omen’ny Telma. Manamarina ny maha voalohany azy ny fahazoany satan’ny maha sampandraharaha elektronika momba ny vola azy.
Nahazo ny satan’ny maha orinasa mampiasa ny fifanakalozam-bola eletronika (EME) azy ny Telma money SA, mampiasa ny MVola, nanomboka ny taona 2018. Nanome azy izany sata izany ny Banky foiben’i Madagasikara (BFM). Voalohany manana izany sata izany ny MVola eto Madagasikara, maneho ny maha sangany azy amin’ity sehatra ity satria nisantatra ny fifanakalozam-bola elektronika eto amintsika, ny taona 2010.
Maro ny tolotra azo ampiasana ny MVola, manatsotra ny fiainana andavanandron’ny mponina sy ny mpanjifa amin’ny alalan’ny finday sady manamora ny lafiny fitantanan-draharaha. Santionany amin’izany ny fahafahana mandoa ny fatioran’ny Jirama, ny fandraisana ny fisotroan-dronono, ny fandoavana saram-pamandrihana televiziona, ny varotra amin’ny internet, sns. Eo koa ny fifanakalozam-bola iarahana amin’ny banky (ny BNI, ny BOA,…), ny Western Union, ny findramam-bola eo no ho eo (hatramin’ny 500 000 Ar), ny fitahirizam-bola.
Mitombo ny tombontsoan’ny mpanjifa
Mahazo tombontsoa koa ny orinasa amin’ny fandoavana ny karaman’ny mpiasa, ny latsakemboka any amin’ny Cnaps sy ny Ostie, ny fandoavan-ketra tambatra (impôts synthétiques), sns.
Hampitombo ny tombontsoan’ny mpanjifa ny fahazoan’ny MVola ny satan’ny EME azy. Mitaky andraikitra vaovao izany, amin’ny maha orinasa misehatra amin’ny internet sy ny fifandraisan-davitra ny MVola ka misy ny lalàna sy fepetra tsy maintsy arahina, araka ny lalàna navoakan’ny Vaomiera manara-maso ny lafiny banky sy ny vola (CSBF). Eo koa ny fanarahana ny fepetra mikasika ny famantarana amin’ny fomba elektronika ny mpanjifa rehetra (KYC).
Manamarina ny maha voalohany ny MVola eto Madagasikara amin’ny lafiny fampiasam-bola elektronika ireo voalaza ireo.